Nei Yako Inotevera WordPress theme Inofanirwa Kuteerera | Martech Zone
As wirirana patani kukura mukuzivikanwa, ndiri kuona kumwe kunoshamisa kwekuitwa kwe kupindura kwaitwa nemazvo. Uye nevatengi vasina imwe nhare mbozha, tiri kuona kuvandudzwa kwakanyanya mu injini yekutsvaga kuoneka naizvo.
WordPress madingindira atora zano uye kune mimwe mienzaniso isinganzwisisike kunze uko (yedu boka saiti ndeimwe yacho). Nepo dhizaini uye masitaera akaomarara, mukana mukuru hausi wekuchengetedza kutaridzika uye kunzwa munzvimbo dzakasiyana, kana kuburikidza nepuregi. Tinotarisira pakupedzisira kugadzira Martech Zone kupindura rimwe zuva!
Heano mamwe mabhenefiti ekutenga Inoteerera theme kune yako inotevera WordPress kuitisa kubva kune vanhu vari WP Inoteerera Matimu:
Tags: madingindira anodaviriraWordPressWordpress inopindura madingindirawordpress themes